Ny Duet Display dia mamadika ny takelakao ho efijery faharoa ho an'ny PC | Androidsis
Ao an-trano mazàna dia manana fitaovana marobe isika ary mety hoe manana finday isika taona vitsivitsy lasa izay izay tsy haintsika ny manome fiainana vaovao. Mety ho antsika izy io avadiho ny efijeryo ho iray faharoa ho an'ny PC na Mac anao.
Izany hoe, afaka mamadika telefaona finday na takelaka ianao, tsaratsara kokoa amin'ny tranga faharoa noho ny haben'ny efijery azy, ho lasa faharoa izay ahafahanao manatsara ny vokatrao, rmanao multitasking na ireo safidy ireo amin'ny fanitsiana horonan-tsary fa afaka manao anao ny ranomasina soa. Fiovam-po izay hotanterahinay amin'ny fampiharana mahafinaritra izay tonga andro vitsivitsy lasa izay avy amin'ny fivarotana app ho Android.
1 Fampisehoana Duet Display ho an'ny Android
2 Ahoana ny fanovana ny efijery findainao na ny takelakao ho iray faharoa ho an'ny PC
Fampisehoana Duet Display ho an'ny Android
Nandritra ny andro vitsivitsy dia azo idirana ao amin'ny Play Store ny fahazoana Duet aorian'ny nanampian'ny mpandraharaha azy. Izany no afaka mamadika an'io tablety io ianao ho afaka ampiasaina ao amin'ny iray faharoa ho an'ny PC misy Windows na Mac; Etsy an-danin'izany, tsy ho ela dia ho afaka hampiasa ny solosainao amin'ny Windows 10 ianao hamaly ireo antso tonga amin'ny findainao ho an'ny fanandramana manao akanjo tsara sy milamina kokoa.
Duet Display dia efa teo amin'ny fitaovana iOS efa ela. rariny nanomboka tamin'ny 2014 dia navela ny fampiasana iPhones sy iPads hamadika azy ireo ho fampisehoana faharoa ho an'ny Mac sy PC. Ka manomboka anio, raha mbola manana telefaona, takelaka na Chromebook misy Android 7.1 na avo kokoa ianao dia afaka manao toy izany koa.
Tokony holazainay fa tsy miatrika ny vahaolana tokana izahay hanovana ny efijery findainao na ny takelaka misy anao ho sekely faharoa, fa misy maro hafa, saingy ireo mpamorona Duet no miresaka momba ny fitaovan'izy ireo izay manome ny indrindra. Miresaka izy ireo fanohanana eo amin'ny sehatra hafa, encryption 256-bit, fanavaozam-bolana ary ny fahombiazana izay tsy misy ny lag.
Ahoana ny fanovana ny efijery findainao na ny takelakao ho iray faharoa ho an'ny PC
Ny Duet Display dia tsy hanamora ny fiainanao aloha. Izahay dia miresaka momba ny rindrambaiko premium, ary izay tsy misy kinova fitsapana, izay mitentina € 21,99. Raha tsy manana teti-bola ianao, dia azo antoka fa ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny mametraka azy ao anaty lisitra faniriana ary miandry ny tolotra mampihena ny vidiny. Raha ny lojika dia miresaka momba ny rindranasa iray ahazoana tombony amin'ny famokarana ho an'ny karazana matihanina maro isika, amin'izay dia azontsika atao fa amin'ny fanovana ireo fitaovana tsy ampiasaintsika dia nampiakatra ny vidiny izy ireo.
Raha te hankafy ity fampiharana ity dia mila ny fampiharana miaraka isika amin'ny Mac, miaraka amin'ny kinova 10.14 na avo kokoa amin'ny Apple OS, ary amin'ny Windows, miaraka amin'ny kinova 10. Hifandray izahay solosaina amin'ny alàlan'ny tariby USB Type-C (tahaka ny mitranga amin'ny Samsung Dex, na dia mendrika azy aza ny microUSB) na amin'ny alàlan'ny zotra tsy misy tariby; farafaharatsiny eto dia samy hafa ny safidintsika ary tsy terena hitady dongle isika raha mila izany. Nampandrenesina ianao fa ny mpampitohy microUSB dia tsy mitombina ary fantatray fa noho ny hafainganam-pandeha ...
Ka tsy maintsy mividy ilay fampiharana fotsiny ianao:
Zahao ny kinovan'ny Mac OS sy Windows 10 Inona no hanananao.
Hamarino tsara fa manana fifandraisana USB karazana-C ianao.
Ankehitriny dia manokatra ny fampiharana amin'ny fitaovana tiana hiova izahay ary ho hitan'ny fampiharana ho azy ilay fitaovana.
Avy amin'io efijery mikasika io no ahafahantsika mitantana ny birao miaraka amin'ny tombony lehibe kokoa ary hamela anay hankafy an'io andian-tombony io toy ny multitasking, famokarana bebe kokoa, copie-paste mahomby kokoa ary andiana lahasa hafa izay azo antoka fa manome hazavana ao an-tsainao.
Una fampiharana antsoina hoe Duet Display izay, na dia premium aza ary amin'ny vidiny lafo dia hanome anao traikefa nahafinaritra mihoatra ny mahafinaritra ny fametrahana takelaka faharoa amin'ny PC-nao, na amin'ny alàlan'ny Windows 10 na Mac OS. Fampiharana mahaliana kokoa noho izao ankehitriny izao izay ananantsika mazàna ao anaty vatasarihana birao ary afaka manavotra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hamadihana ny efijery findainao Android ho iray faharoa ho an'ny PC na Mac anao